AVI in Android - Sida loo Play AVI on Android Phone
> Resource > Android > Sida loo Play File AVI ah oo ku saabsan Phone ah Android
"Dhawaan waxaan ku leeyihiin doonayo cusub HTC, oo doonayay inuu ka ciyaaro jecel my videos AVI ku yaal. Laakiin markii dambe ogaaday in qaab AVI aan la taageeray by telefoonada Android. Ma jiraan wax barnaamijyo iga caawin kara si loo xaliyo dhibaatada? " - Laga bilaabo user ah Android.
Sababtoo ah ee xallinta sare ee ugu telefoonada cusub Android, waxaad ku taagan tahay fursad aad u fiican in la kulma tayo leh oo cajiib ah videos ku yaal meel kasta, laakiin waxaa jira caqabado ah oo la jaan qaada qaabab video. Waxaa laga yaabaa inaad badan oo AVI videos on computer gurigaaga iyo doonayay inuu iyaga u ciyaaro telefoonka aad Android, habka ugu fudud yahay inay isticmaalaan ah AVI in Converter Android . The Wondershare MobileGo for Android kaa caawinaysaa in aad si loogu badalo files AVI si aad u qaabab file Android-socon.
Talaabada 1: Isku telefoonka aad Android inay kombiyuutarka
Burcad Manager MobileGo Android oo markaas ku xidhi telefoonka aad Android inay PC. Waxaad computer awood u yeelan doonaan in la ogaado qalab aad si toos ah.
Tallaabo 2: Ku dar AVI videos in phone Android
Tag Videos Tab, guji dar oo dooro filimada in aad doonayay inuu ka ciyaaro aad Android. Yar suuqa kala A arbushin doonaa, oo kuu sheegaysa in filimada aad soo degida ma taageersana telefoon oo weydii haddii aad jeclaan doonaa si ay u badalo. Riix ah Haa button iyo software bilaabi doonaa si loogu badalo files AVI si aad u qaab Android-socon inta lagu jiro kala iibsiga.
In ka Goobta uu furmo suuqa 's, waxaad dooran kartaa in loogu badalo videos ee tayada yar yahay, si caadi ah ama u sarraysaa sida aad jeceshahay. Tayada sare qaadan doona awoodda wax yar ka badan ama meel telefoonka aad Android. Isla mar ahaantaa, markii qaab beddelidda laga yaabaa yara dheer.
Ka dib qaab beddelidda, AVI videos aad loo rogi doonaa in qaab Android-saaxiibtinimo oo ah qaab MP4 ah oo ku daray rogtid oo aad Android.
Hadda waxaad karaan ciyaaro files AVI telefoonka aad Android , Manager MobileGo Android uu yahay tababare Android anfacaya iyo smart oo ma taageeri ma aha oo kaliya diinta video inay qaab file socon aad telefoonada Android, laakiin sidoo kale ku wareejinaya xiriirada, SMS, muusig iyo sawiro. Waa maxay dheeraad ah, waxa aad maamuli kartaa, raad raac ah ama soo celin aad xiriirada, SMS iyo codsiyada la kaliya hal click.
Waxaad daawan kartaa tutorial video hoose si fiican loo fahmo.
Haddii aad rabto in aad si toos ah u ciyaaro videos on telefoonka aad Android aan diinta, waxaad isku dayi kartaa ciyaaryahankeena Android oo lacag la'aan ah, ka Wondershare Player u Android . Gaar ah oo loogu talagalay telefoonka aad Android, ay taageerto loo maqli karo ee qaabab kala duwan sida AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, VOB iyo in ka badan. Waxa kale oo aad ka daawan kartaa filimada online ka YouTube, VEVO, Hulu, Dailymotion, Metacafe iyo vimeo in app hal. Ka sokow in, waxaa jira muujinta ah ee geeyo si toos ah iyo hago ah videos oo music aad telefoon si shaashadda weyn sida PC ah, Mac iyo TV! Download this ciyaaryahan AVI awood Android hadda inaad ku raaxaysatid videos waqti kasta iyo meel kasta!